सबटाइटलमा ओस्कर !- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
सबटाइटलमा ओस्कर !
माघ २८, २०७६ यज्ञश
काठमाडौँ — हुन त कथा फिल्मका लागि एउटा धागो हो । जसरी फूलका थुंगालाई धागोले मालाका रूपमा बाँधेर राख्छ, त्यसैगरी कथाले दृश्यहरूका थुंगालाई एउटा निश्चित आकारमा बस्न बाध्य पार्छ । फिल्मलाई खास आकार दिने काम पटकथा, छायाँकन, सम्पादन र प्रोडक्सन डिजाइनजस्ता विधाले गर्छन् । जसरी माटो बिना इँटा बन्दैन, धागो बिना कपडा बन्दैन, त्यसैगरी कथा बिना आख्यान बन्दैन । र, आख्यान बिना 'प्यारासाइट' बन्दैन । अनि, इतिहास बन्दैन ।
यो हप्ता इतिहास बन्यो । दक्षिण कोरियाली निर्देशक बोङ जो हुको फिल्म 'प्यारासाइट'ले उत्कृष्ट फिल्म, निर्देशक, अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म र पटकथाजस्ता महत्तवपूर्ण विधामा ओस्कर जितेर यो इतिहास लेख्यो । अंग्रेजीबाहेकको भाषामा बनेर पनि उत्कृष्ट फिल्मको ओस्कर जित्ने ९२ वर्षको इतिहासमा यो पहिलो फिल्म बन्यो । त्यस्तै, विदेशी भाषा र उत्कृष्ट फिल्म दुवैमा ओस्कर जित्ने पनि यो पहिलो फिल्म बन्यो । यसै वर्षको सुरुतिर प्रसिद्ध क्यान फिल्म फेस्टिभलमा पनि यसले यस्तै रेकर्ड बनाएको थियो । यो फिल्म क्यानको सर्वोच्च पुरस्कार पाम डि'अर जित्ने पहिलो कोरियन फिल्म बनेको थियो ।
निर्देशक बोङ हलिउडका लागि अपरिचित होइनन् । यसअघि नै 'मेमोरिज अफ मर्डर' र 'द होस्ट'जस्ता फिल्मबाट उनी स्थापित भइसकेका थिए । बोङ दुई वर्षअघिको नेटफ्लिक्स फिल्म 'ओक्जा'पछि निकै चर्चामा आएका थिए । नेटफ्लिक्समा देखाइएको फिल्मलाई मोसन पिक्चर नमान्ने भन्दै क्यानले यो फिल्मलाई प्रतिस्पर्धामा राख्न अस्वीकार गरेको थियो ।
दुई वर्षमा नै धेरै कुरा बदलियो । बोङले क्यान जिते र जिते ओस्कर । त्यो पनि एकै वर्ष ४ विधामा । दक्षिण कोरियालाई सिनेमाको उदाउँदो शक्ति मानिन्थ्यो, त्यसमा अब लालमोहर लागेको छ । ओस्कर हलिउड महिमागान गर्ने अवार्ड भए पनि संसारभर यसको धाक निकै ठूलो छ । त्यो किन पनि छ भने राजनीति र सामरिक शक्तिमा अमेरिकाको धाक अझै पनि सबभन्दा ठूलो छ । शक्तिशालीका सत्य बढी विश्वसनीय मानिएजस्तै अहिलेको समयमा बलशालीको लालमोहर पनि बढी चहकिलो देखिन्छ ।
यो मान्यता पाउनका लागि कोरियाले आफ्नो फिल्म उद्योगमाथि कति लगानी गर्‍यो भने अलग कथा छ । कुनैबेला हलिउडको कब्जामा पुगिसकेको बजारलाई त्यसबाट निकाल्न कोरियाले ठूलो मिहिनेत र लगानी गरेको थियो । फिल्म एकेडेमी खोलेर युवाहरूलाई फिल्म पढाउनेदेखि फिल्म फेस्टिभलको आयोजनासम्म कोरियाले कुनै कसर बाँकी छोडेको थिएन । त्यही फिल्म एकेडेमीबाट १९९० मा ग्राजुयट गरेका बोङले तीस वर्षमा ओस्कर जिते । यसलाई कोरियन सफलताको एउटा पूर्ण चक्रका रूपमा अर्थ्याइएको छ ।
बोङले आफ्नो ओस्कर भाषणमा हलिउड निर्देशक मार्टिन स्कोरसेजीको भनाई उद्धृत गरे- 'जे सबैभन्दा वैयक्तिक हुन्छ, त्यो नै सबभन्दा बढी सृजनशील हुन्छ ।' उनले भने, 'यो कुरा मैले फिल्म एकेडेमीको विद्यार्थी छँदा पढेको थिएँ र यसबाट निकै प्रभावित थिएँ ।' उनले मार्टिन स्कोरसेजीका फिल्मबारे नै एकेडेमीमा अध्ययन गरेका थिए । र, क्विन्टन टेरन्टिनोको आफूमा निकै प्रभाव रहेको बताउने गरेका थिए ।
रोचक त के भने, यसपाली उत्कृष्ट निर्देशकमा उनीसँग उनका यी दुवै 'आइडल' प्रतिस्पर्धी थिए । स्कोरसेजी नेटफ्लिक्स ड्रामा 'दि आइरिसम्यान'का लागि र क्विन्टन 'वन्स अपन अ टाइम इन हलिउड'का लागि । बोङले यी दुवैलाई पछि पार्नु भनेको खासमा उनको मात्र जित होइन, यो जित हो कथाको । कथाको खोजी र वाचन शैलीको । बोङको यो जितको सबभन्दा ठूलो अर्थचाहिँ एक लाइनमा भन्न सकिन्छ । त्यो हो, '‌ओस्करले (स‌ंसारले) अब अंग्रेजीबाहेकका भाषा पनि बुझ्छ ।'
तिमीसँग सुन्दर कथा र त्यसलाई भन्ने मौलिक शैली छ भने त्यसलाई जुनसुकै भाषामा भन, संसारले सुन्छ । सिनेमाको भाषाले पात्रको भाषालाई जितेको प्रमाणको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । यसलाई केही अमेरिकी पत्रकार/समीक्षकहरूले 'सबटाइटल'को जितका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।
संसारका विभिन्न भाषाका फिल्मलाई दृश्यसँगै सबटाइटल पनि पढेर बुझ्ने हामीजस्ता दर्शकका लागि सबटाइटल सिनेमा एउटा छुट्टै जनरा नै हो । कतिपय त अंग्रेजी फिल्मसमेत सबटाइटल पढेर बुझ्ने दर्शक हुन्छन् । अंग्रेजी एउटै भाषा भए पनि पात्रको भाषिका र शैलीले गर्दा कतिपय संवाद बुझ्न गाह्रो हुन्छ । यस्तोमा एकेडेमी अफ मोसन साइन्स एन्ड पिक्चर्सका झन्डै सात हजार सदस्यले खाँटी अंग्रेजीको '१९१७', 'आइरिसम्यान' र 'वन्स अपन अ टाइम इन हलिउड'को सट्टा 'प्यारासाइट'लाई मत दिनु भनेको सबटाइटल जनरामाथि पनि लालमोहर लाग्नु हो ।
बोङले ओस्कर समारोहमा कोरियन भाषा बोले । सर्वोत्कृष्ट अन्तर्राष्टिय फिल्मको अवार्डपछि अर्को अवार्ड लिन जाँदा उनले कोरियनमा भने- 'मैले त यतिमै मेरो अवार्ड सकियो होला भन्ठानेको थिएँ ।' यसलाई कोरियन अनुवादकले अंग्रेजीमा उल्था गरिन् । आफ्नो फिल्मजस्तै बोङले ओस्कर समारोहलाई पनि उल्था र सबटाइटल समारोह बनाइदिए । उनी चारपटक अवार्ड थाप्न गए, चारैपटक अनुवादक लिएर । ट्विटरमा उनकी अनुवादकको निकै प्रशंसा भयो । एकजनाले लेखे- यदि उल्थाको ओस्कर हुन्थ्यो भने यिनलै पाउनुपर्थ्यो !
अनुवादका साथ ओस्कर मञ्चमा निर्देशक बोङ ।
'प्यारासाइट' एउटा यस्तो आँखीझ्याल बनेको छ, जसबाट संसारले एसियालाई हेर्नेछ । सत्यजित रे र अकिरा कुरोसावाले पाएको मानार्थ ओस्कर धेरै वर्षसम्म एसियाका गर्व रहे । त्यसपछि पनि कहिले रिचर्ड एटनवरो र त कहिले ड्यानी बोयलका 'गान्धी' र 'स्लमडग मिलेनियर'का ठिमाहा कथामा एसियाको गर्वले आफ्नो मुख लुकाइरह्यो । ताइवानका निर्देशक आङ लीले बल्लबल्ल मुख देखाउनलायक बनाएका थिए । र, त्यसमा एआर रहमानले संगीतको धुन जोडिदिएका थिए ।
पछिल्लो समय 'थ्री एमिगोज', अलेहान्द्रो गोञ्जालेज इनारितु (बर्डम्यान र दि रेभेनान्ट), एल्फोन्सों कुरों (ग्रयाभिटी र रोमा) र गुर्लिरमो डेल टोरो (सेप अफ दि वाटर) ले स्पेनी भाषा र मेक्सिकन कथालाई ओस्करको पयार्य बनाइरहेका थिए । यी तीन स्प्यानिस भाषीले लगातारजसो पाँच वर्ष उत्कृष्ट निर्देशकको ओस्करमा कब्जा जमाए । इनारितु र कुरोंले त दुई दुईपटक यो अवार्ड जिते । त्यसमा ब्रेक लगाउने काम गरिदिए, बोङले ।
विश्व सिनेमामा एसियाली फिल्म भन्नाले मुख्यतः जापान, चीन र कोरियाका फिल्म बुझिन्छ । कुनैबेला एसियाको शक्ति राष्ट्रका रूपमा अमेरिकासँग युद्ध लडेको र एसियाको ठूलो भूभाग (चीन र कोरियासमेत) लाई कब्जामा लिएको जापान सिनेमामा पनि ठूलो शक्ति हो । चीनले ठूलो आर्थिक फड्को हान्नुअघि सम्म जापान नै अमेरिकापछि हलिउडको ठूलो बजार थियो । अहिले त्यो स्थान चीनले लिइसकेको छ ।
जापान र चीनका साथमा कोरिया अर्को ठूलो बजार हो । प्रविधि र सिनेमा उद्योगमा कोरिया पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको शक्ति हो । यस्तै, हङकङ, ताइवान, भारत, इरान, मंगोलिया आदि देशका फिल्मले पनि बेलाबेला उपलब्धिहरू हासिल गरिरहेका छन् ।
संसारको सबभन्दा धेरै जनसंख्या बसोबास गर्ने तर विकास र जीवनस्तरमा पछाडि रहेको एसिया कथाको मामिलामा निकै धनी छ । विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको वैभव एसियासँग छ । त्यसबाहेक जहाँ गरिबी छ, त्यहाँ द्वन्द्व छ । जहाँ द्वन्द्व छ, त्यहाँ कथा छ ।
'प्यारासाइट' पनि यही गरिबी र द्वन्द्वको कथा हो । 'प्यारासाइट' दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलका दुई परिवारको आवरणमा दुई वर्गको कथा हो । एउटा गरिब परिवार घरको बेसमेन्टमा बस्छ, जसको घरमा घाम त के हावासमेत छिर्न मुस्किल छ । अर्को परिवारको यस्तो भिल्ला छ, जसका लागि घामसमेत 'प्राइभेट' छ भन्न सकिन्छ ।
यी दुई फरक जीवन र आर्थिकस्तर भएका प्राणीहरूको जम्काभेट भए के होला ? 'प्यारासाइट' त्यसको कथा हो । सतहमा हेर्दा धनका लागि गरिब परिवारले गर्ने बदमासी र ट्रिकहरूको कथा भए पनि यो खासमा वर्गीय द्वन्द्वको कथा हो । यो द्वन्द्वमा को कसप्रति आश्रित छ, कुनचाहिँ परिवारले अरुको रगत चुसिरहेको छ, त्यसको निराकरण गर्ने जिम्मा दर्शकलाई दिइएको छ ।
के धनीको सेवामा खटिएका सबै गरिब परिजिवी हुन् त ? कि सारा गरिबले काम गरेर पालिदिने, सुविधा पुर्‍याउने धनीहरू परजिवी हुन् ? यही द्वन्द्व 'प्यारासाइट'को कथा हो । यो कथा कुनै पनि एसियाली अथवा विकासशील देशका लागि आमकथा हो । बस, त्यसलाई भन्नका लागि बोङले, डार्क कमेडी र थ्रिलरको शैली अपनाए । फिल्मको भाषामा जाने हो भने, हरेक सटको डिजाइनदेखि रंगमा निर्देशक बोङले अर्थ घुसाएका छन् । तपाईले राम्ररी हेर्नुभयो भने गरिब परिवार र बेसमेन्टका दृश्यमा लगाइएको फ्रेम र धनी परिवारको फ्रेम नै फरक छ । सट साइज र रंगको संयोजन फरक छ । लाइट र क्यामेरा एंगल फरक छ । कतिपय कुराहरू निर्देशकले संवादबाट मात्र होइन, क्यामेराबाट पनि भनिरहन्छन् ।
तस्बिरहरु : रोयटर्स
स्कोरसेजीले भनेजस्तै, फिल्मको पर्दामा के देखिन्छ भन्नेमात्र होइन, केके कुरा देखिँदैन भन्ने पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण हुन्छ । युरोपेली सिनेमामा पर्दाबाट विस्तारै कथा गायब भइरहेको छ । युरोप शैली र सिल्पतिर बढी उत्सुक छ । यसले फिल्मलाई शुद्ध कलाका रूपमा विकास त गरिरहेको छ तर मानिसहरूको कथा र संघर्षप्रतिको आकर्षणलाई मारिरहेको पनि छ । हलिउडका लागि फिल्म मुख्यत: अर्थोपार्जन, स्टारडम र ग्ल्यामरको उद्योग हो । यसैले त हरेक महिना दुईटा सुपरहिरो आकाशमा उडिरहेको देखिन्छन् ।
यस्तोमा बीचमा बसेर कथा र आख्यानको खोजी गर्ने जिम्मा एसियाले उठाएको छ । द्वन्द्व, अभाव र अघि बढ्ने चाहनाको हुटहुटीमा पिल्सिइरहेको एसियाली समाजको कथा कहिले 'स्लमडग मिलेयिर' बनेर ओस्करको मञ्चमा गुञ्जिन्छ त कहिले 'प्यारासाइट' बनेर यसलाई चुस्न पुग्छ । भेनिस र बर्लिन फेस्टिभलमा पुगेका नेपालका 'कालो पोथी' र 'सेतो सूर्य'हरू पनि यस्तै कथा हुन् ।
सोचनीय एउटा कुराचाहिँ के छ भने, ओस्कर एक किसिमले अश्वमेध यज्ञको घोडा हो । अश्वमेधको घोडाले जहाँजहाँ पाइला हाल्यो, त्यो जमिन यज्ञ गर्ने राजाको भएजस्तो ओस्कर पनि जहाँ जहाँ पुग्छ, त्यो बजार हलिउडको कब्जामा जाने खतरा हुन्छ । लामो समयसम्म ओस्करले अमेरिकी संस्कृति र हलिउडको बजार प्रभुत्वलाई फैलाउने काम गरेको हो । अमेरिकी सेनाले समेत हलिउड फिल्ममा लगानी गर्ने गर्थ्यो । यसको अर्थ हलिउड प्रोपोगान्डा टुलका रूपमा पनि प्रयोग भएको हो । विश्वसुन्दरीजस्ता प्रतियोगिताले सौन्दर्य प्रसाधनका सामाग्रीको विज्ञपान गरेजसरी ओस्करले पनि हलिउडकै प्रचार गर्छ ।
यस्तोमा सवालचाहिँ यो ओस्करमाथि 'प्यारासाइट'को चढाइ हो कि, 'प्यारासाइट'मार्फत् हलिउडले आफ्नो हात अझै फैलाएको हो भन्ने हो । आउने दिनमा ओस्करप्रति एसियाको आकर्षण पक्कै बढ्नेछ । जसरी नेपालका फिल्महरू ठूला फिल्म फेस्टिभलहरूमा पुगेका छन्, त्यसैगरी ओस्कर पनि एक कदम नजिक आएकै हो । नेपाली वा यो क्षेत्रका सबैजसो फिल्म पश्चिमका लागि सबटाइटल फिल्म हुन् । क्यान, बर्लिन र भेनिसजस्ता ठूला फेस्टिभल सुरुदेखि नै सबटाइटलप्रति उदार थिए । ओस्कर पनि यसमा उदार देखिएको छ ।
कुनै फिल्मले ओस्कर वा ठूलो फेस्टिभलमा अवार्ड जित्नु, मनोनित हुनु भनेको एउटा ट्रफीको मात्र कुरा होइन । यसले संसारभरको फिल्म बजारमा एकैपटक प्रवेशको ढोका खुल्नु हो । अब कुरा निर्भर गर्छ, हामीले बनाउने फिल्ममा । प्रवेशका अरु छिद्रहरू पनि खुल्दै जानेछन् । के त्यो छिद्रलाई मूलद्वार बनाउन हामी तयार छौं ? हाम्रा फिल्ममेकर तयार छन् ? मुख्यधाराका व्यवसायीक फिल्म बनाइरहेकाहरूको यतातिर ध्यान नहोला । प्रयोगात्मक मौलिक फिल्मको अभ्यास गरिरहेका र फिल्मको पढाइ गरिरहेको ठूलो युवा जमातमा अब यो निर्भर हुनेछ ।
प्रकाशित : माघ २८, २०७६ २०:०७
नेकपाको विशेष अभियान : कुन प्रदेशमा कहिले हुँदैछन् भेला र बैठक ?
ओली र दाहालसहित शीर्ष नेता सहभागी हुने
माघ २८, २०७६ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भएको विशेष अभियानमा नेकपाले शीर्ष नेतृत्वलाई समेत सहभागी गराउने भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत सचिवालयका शीर्ष नेता अभियानमा जोडिने भएका छन् ।
नेकपाले फागुन महिनामा अभियानको तयारी र चैत १ गतेदेखि पार्टी एकता सुदृढीकरण र जनसम्बन्ध विस्तारका लागि उपत्यकासहित सातै प्रदेशमा अभियान सुरु गर्दैछ । महासचिव विष्णु पौडेलका अनुसार मंगलबार बिहान नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच बालुवाटारमा भएको छलफलपछि प्रदेशस्तरीय भेला र बैठकका मिति तय भएका हुन् ।
प्रादेशिक भेला र बैठक प्रदेश ५ को बुटवलबाट सञ्चालन गर्ने र विराटनगरमा टुंगाउने नेकपाको तयारी छ । महासचिव पौडेलले फागुन महिना अभियानको तयारी बैठक र भेला गर्ने साथै चैत,बैशाख र जेठमा अभियान सञ्चालन गर्ने इकान्तिपुरलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार फागुनमा हुने प्रदेश भेला र बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालसहित सचिवालयका सबै सदस्य सहभागि हुनेछन् । ‘अभियानमा सचिवालयका सबै कमरेड सहभागि हुनुहुनेछ । अहिलेसम्म भेला र बैठकको मिति तय भएपनि को कहाँ जाने भन्ने तय भइसकेको छैन । त्यो एक दुई दिनमा टुंग्याउँछौं,’पौडेलले भने ।
प्रादेशिक भेला र बैठक फागुन ४ देखि सुरु भएर फागुन २१ मा सकिने छन् । चैत्र १ बाट जिल्ला जिल्लामा अभियान सञ्चालन गर्ने योजना नेकपाको छ । गत माघ १५ देखि १९ सम्म चलेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विशेष अभियानको कार्ययोजना पारित गरेको थियो ।
अभियानले वैचारिक, राजनीतिक भावनात्मक एकता सुदृढ गर्ने नेकपाको विश्वास छ । अभियानमा सरकारको कामको प्रचार हुने र जनसम्बन्ध विस्तार हुने नेकपाको दाबी छ । पार्टी एकताको २० महिनापछि नेकपाले तल्लो कमिटीसम्म पुग्‍ने गरी अभियान चलाउन लागेको हो ।
यस्तै,अभियानका क्रममा पार्टी सदस्यताको नवीकरण गर्ने योजना नेकपाको छ । अभियानमा केन्द्रीय सदस्यसहित सबै पार्टी सदस्य जोडिने छन् । नेकपाले आठ लाख पार्टी सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधार–सुदृढ पार्टी, सुशासन र लोकप्रिय सरकार’ भन्ने अभियानको मूल नारा तय भइसकेको छ ।
प्रदेशस्तरीय भेला र बैठक कहिले ?
नेकपा कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालका अनुसार प्रदेशस्तरीय भेला एक दिन र अर्को दिन बैठकको कार्यक्रम तय भएको छ । नेकपाले प्रदेशस्तरीय भेला प्रदेश ५ बाट सुरु गर्ने रिजालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश ५ मा फागुन ४ गते भेला र ५ गते बैठक, कर्णाली प्रदेशमा फागुन ६ र ७, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ र १०, गण्डकी प्रदेशमा १२ र १३, वाग्मती प्रदेशमा १५ र १६, प्रदेश २ मा १८ र १९ र प्रदेश १ मा २० गते भेला र २१ गते बैठक तय भएको छ ।
अभियानको उद्देश्य के ?
नेकपाले सबै जिल्ला हुँदै स्थानीय तहका वडा र टोलसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । महासचिव पौडेलका अनुसार फागुन महिनामा अभियानको तयारी बैठक र भेला गर्ने र चैत १ बाट अभियान सञ्चालन गरी जेठमा सम्पन्न गर्ने योजना छ । यस्तै असार र साउन महिनामा अभियानको समिक्षा गर्ने निर्णय नेकपाले गरेको छ ।
पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुकाबीचमा वैचारिक, संगठनात्मक एवं भावनात्मक एकताको विकास गर्ने, पारदर्शी, सादा एवं जवाफदेही जीवनशैली, श्रमप्रतिको सम्मान र सहभागिताको विकास गर्ने, नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुमा पार्टी, आन्दोलन तथा नेतृत्वप्रतिको भरोसा र विश्वास विकसित गर्ने उद्देश्य सहित नेकपाले अभियान सञ्चालन हुँदैछ ।
यस्तै,पार्टीमा सबै प्रकारका समूहबन्दी वा गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलालाई निरुत्साहित गर्ने,पार्टी एकतालाई सुदृढ र सबल बनाउने, जनता र राष्ट्रको पक्षमा सरकारले गरेका राम्रा काम,उपलब्धि र भावी योजनाका सम्बन्धमा पार्टीपंक्ति र जनतलाई प्रशिक्षित गर्ने अर्को उद्देश्य अभियानको छ ।
सरकारका सकारात्मक कामको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने,नेकपाको नेतृत्वमा विकास,समृद्धि र सामाजिक न्याय सम्भव छ भन्ने विश्वास जनतामा जगाउने,प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार तथा जनप्रतिनिधि संस्थाहरुलाई पार्टीको घोषणा पत्र र नीति अनुरुप परिचालित हुन निर्देशित गर्ने अभियानले सहयोग गर्ने नेकपाको उद्देश्य छ ।
अभियान सम्पन्न गरेपछि नेकपाले ०७७ भदौदेखि मंसिरसम्ममा सबै स्थानीय र प्रदेश तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र चैत्र २५ देखि ३० मा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रकाशित : माघ २८, २०७६ १९:५५